यी देश जस्को आफ्नो छुट्टै नक्सा समेत छैन! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यी देश जस्को आफ्नो छुट्टै नक्सा समेत छैन!
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०७४, आईतवार October 15, 2017
काठमाडौं । विश्वका हरेक मुलुकको आ-आफ्नै मानचित्रमा नक्सा हुन्छन भन्ने तपाई सोचिरहनु भएको छ भने तपाईको यो सोच गलत छ । विश्वमा यस्ता देश पनि छन जस्को आफ्नै नक्सा समेत छैन । ती देशको आफ्नो भिन्न अस्तित्व त छ तर नक्सा भने छैन । विश्वका पाँच भन्दा बढी देशका नक्सा छैनन । कुन- कुन हुन त ती देश ?
एजेन्सी ।पढनलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने कुरा थाइल्यान्डकी किमलान जिनाकुले पुष्टी गरेकी छिन । उनल्े ९१ वर्षको […]
चिकित्सकहरु आन्दोलनमा ; देशभरका अस्पताल ठप्प (के के छन् त मागहरु ?)
असोज ६, काठमाडौं । आज देखि नेपाल चिकित्सक संघको आव्हानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा […]
असनेपाल न्युज । साउदी अरब कृत्रिम मानव (रोबोट) लाई नागरिकता दिने विश्वमै प्रथम देश बनेको छ । सोफिया नामक […]